Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Nahazo fankatoavana izao ny fanabeazana aizana am-bava
Namboarin'ny Mithra Pharmaceuticals, ny NEXTSTELLIS dia pilina fanabeazana aizana voalohany amin'ny karazana misy estrogen misy fiantraikany ambany vaovao - estetrol (E4) ary ny progestin voaporofo - drospirenone (DRSP). E4 dia estrogen voajanahary novokarin'ny vatan'olombelona mandritra ny fitondrana vohoka, avy amin'ny loharanon-javamaniry ankehitriny. Miaraka amin'ny orinasa simika vaovao (NCE), ny NEXTSTELLIS dia hahazo 5 taona amin'ny tsena manokana.
Ny tsenan'ny fanabeazana aizana any Aostralia dia mitentina 125 tapitrisa dolara miaraka amin'ny tsenan'ny fanabeazana aizana am-bava mitambatra (estrogen sy progestin) mitentina mihoatra ny 65 tapitrisa dolara .
Hoy ny tale jeneralin'ny Mayne Pharma Mr Scott Richards: “Faly izahay mampiditra ny NEXTSTELLIS amin'ny tsenan'i Aostralia. Efa 10 taona izay no nahazoan'ny vehivavy Aostraliana hormonina fanabeazana aizana vaovao hodinihina miaraka amin'ny dokoterany. NEXTSTELLIS dia manolotra pilina mahomby, azo antoka ary azo leferina tsara miaraka amin'ny fanaraha-maso tsara ny tsingerina ary misy fiantraikany kely amin'ny faritra sasany amin'ny vatana. Mayne Pharma dia manolo-tena amin'ny fahasalaman'ny vehivavy ary mamoaka vokatra vaovao mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny vehivavy Aostraliana sy Amerikana. "
Dokotera momba ny fahasalamana ara-pananahana, Dr Terri Foran, dia nilaza hoe: "Ny fanabeazana aizana am-bava mitambatra dia mbola fomba fanao be mpampiasa indrindra amin'ny fifehezana hormonina any Aostralia ary fantatry ny mpitsabo tsirairay fa ny vehivavy tsirairay dia mamaly ny hormonina fanabeazana aizana. Izany no antony maha-zava-dehibe ny ananantsika karazana fomba fanabeazana aizana mba ahafahantsika misafidy izany safidy izany. Amin'izao fotoana izao dia manana karazana progestin be dia be isika, fa ny safidin'ny estrogen dia voafetra amin'ny ethinylestradiol na estradiol. Ny fananana estrogen iray hafa, estetrol (E4), dia manokatra ny mety hisian'ny vehivavy maro hahita fitambarana mety aminy. Ny fikarohana dia manondro fa ny estetrol dia mifantina kokoa amin'ny fiantraikany amin'ny tavy mandray hormonina isan-karazany ao amin'ny vatan'ny vehivavy. Na dia misy fiantraikany irina amin'ny rafi-pananahana ilaina amin'ny fanabeazana aizana mitambatra mahomby aza izy io, dia toa tsy dia misy fiantraikany firy amin'ny aty sy ny nono.
Hoy ny tale jeneralin'ny Mithra Atoa Leon Van Rompay: “Taorian'i Etazonia, Kanada ary Eoropa, dia faly izahay nahazo ity fankatoavana fanampiny ity ho an'ny fanabeazana aizana vaovao, izay manamafy ny fandefasana ara-barotra amin'ny kaontinanta fahatelo. Ity fankatoavana lehibe fahaefatra azo tamin’ity taona ity, dia mifanaraka tanteraka amin’ny fandaharam-potoanantsika, ka ahafahantsika mandrakotra mihoatra ny 80% amin’ny faritany lasibatra. Izany dia mampiseho bebe kokoa ny fahaizan'ny ekipantsika sy ny tanjaky ny fiaraha-miasa amin'ny Mayne Pharma, izay mahatonga ny fandefasana ara-barotra NEXTSTELLIS ho laharam-pahamehana.